Valo mianaka nilatsaham-baratra 2 maty niaraka tamin’ny ombin-tsarety
Nitrangana loza voajahanary indray tany amin’ny tanànan’i Maevarano Imerimandroso, kaominina Mahasolo satria dia fianakaviana iray manontolo niisa 9 mianaka no indray nilatsahan’ny varatra tany an-toerana.
Niasa teny an-tsaha toy ny fanaon’ny rehetra any ambanivohitra ireto fianakaviana ireo ka rehefa nitrahotraho ny orana dia niomana ny hody izy ireo. Teny an-dalana anefa no niseho ny loza satria dia noriatan’ny varatra izy mianakavy ka torana tsy nahatsiaro tena ireo olona niisa 8 mianaka ka ny iray ihany no tsy naninona. Ity farany no nampandre ny fokonolona ka tonga ny vahoaka namelona ireo niharam-boina. Ny ankizy mianadahy tamin’ireo niharan-doza no nindaosin’ny fahafatesana. Ankoatra izay dia matin’ny varatra ihany koa ny ombin-tsaretin’izy ireo niisa roa, niaraka taminy. Fantatra fa mpila ravinahitra any Mahasolo ireto fianakaviana ireto. Avy ao Faratsiho Vakinankaratra ny tena fiaviany. Efa nentina namonjy ny fasan-drazany izy mianadahy matin’ny varatra, mbola manaraka fitsaboana kosa ireo sasany.